Bayern Munich oo Xasuuqday Hamburger iyo Kooxaha Wolfsburg iyo Borussia Moenchengladbach oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Bayern Munich oo Xasuuqday Hamburger iyo Kooxaha Wolfsburg iyo Borussia Moenchengladbach oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”
Kooxda Bayern Munich ayaa xasuuqday oo garoonkeeda Allianz Arena 8-0 uga badisay kooxda Hamburger SV.
Ciyaaryahanada kala ah Thomas Mueller,Arjen Robben iyo Mario Goetze ayaa min labo gool u kala dhaliyay kooxda Bayern Munich,halka labada gool uu kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Robert Lewandowski iyo Franck Ribery.
Kooxda Bayern Munich oo uu hogaamiyo macalin Pep Guardiola ayaa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ku hogaamineyso 52-dhibcood,halka kooxda Hamburger SV ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aa,iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa waxaa garoonkeeda BayArena 4-5 uga badiyay kooxda Wolfsburg oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka Jarmalka.
Kooxda Wolfsburg ayaa afar ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Bas Dost oo weerarka uga ciyaara,halka goolka shanaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Naldo.
Kooxda Bayer Leverkusen ayaa waxaa qeybtii danbe ee ciyaarta sedax ka mid ah goolasha hat-trick u dhaliyay ciyaaryahan Heung-Min Son,halka goolka afaraad uu u dhaliyay ciyaaryahan Karim Bellarabi.
Kooxda Wolfsburg ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka Jarmalka,waxana ay leedahay 44-dhibcood,halka kooxda Bayer Leverkusen ay horyaalka uga jirto kaalinta lixaad,iyadoo leh 32-dhibcood.
Kooxda Borussia Moenchengladbach ayaa garoonkeeda Borussia-Park 1-0 uga badisay kooxda FC Cologne.
Ciyaaryahan Granit Xhaka ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Borussia Moenchengladbach.
Kooxda Borussia Moenchengladbach ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 36-dhibcood,halka kooxda FC Cologne ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 24-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion oo u Soo Baxday Quarte Finalka Koobka FA Cup-ka “SAWIRRO”
Ku-simaha R.Wasaaraha Dalka Oo Maanta kulan la qaatay Agaasimayaasha waaxyaha XRW “Sawirro”
Ku-simaha R.Wasaaraha Dalka Oo Maanta kulan la qaatay Agaasimayaasha waaxyaha XRW "Sawirro"